रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधन मुद्दालाई सत्ता-स्वार्थको साधन नबनाइयोस् : डा. भट्टराई « Salleri Khabar
रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधन मुद्दालाई सत्ता-स्वार्थको साधन नबनाइयोस् : डा. भट्टराई
१३ चैत, काठमाडौं। सरकार र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरीलगायत सबै राजनीतिक बन्दीको निःशर्त र तुरुन्त रिहाइ गर्न सरकारलाई माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसका लागि जससपाले आफूलाई सत्ता समीकरणमा साथ दिनुपर्ने सर्त राखिरहेका बेला त्यस पार्टीका एक शीर्ष नेता डा. भट्टराईले आफ्ना मुद्दालाई सत्ता-स्वार्थनिम्ति मोलतोलको साधन नबनाउन चेतावनी दिएका हुन्।
थारूलगायत उत्पीडितको पहिचान र अधिकारसहितको राज्य पुनर्संरचना हुनेगरी संविधान संशोधन जसपाको सर्वसम्मत अडान रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सामाजिक सञ्‍जाल ट्‌वीटरमा ट्‌वीट गर्दै भनेका ‘रेशम चौधरीलगायत सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ तुरुन्त र निःसर्त गर। थारूलगायत उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकारसहितको राज्यपुनर्संरचना हुनेगरी संविधान संशोधन गर,’ शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो जसपाको सर्वसम्मत र निरन्तरको अडान हो। यो क्षणिक सत्ता-स्वार्थनिम्ति मोलतोलको साधन नबनोस् र भ्रमको खेती नहोस !’
रेशम चौधरी लगायत सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ तुरून्त र नि:शर्त गर!थारू लगायत उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार सहितको राज्यपुनर्संरचना हुनेगरी संविधान संशोधन गर!यो जसपाको सर्वसम्मत र निरन्तरको अडान हो!यो क्षणिक सत्तास्वार्थनिम्ति मोलतोलको साधन नबनोस् र भ्रमको खेती नहोस!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 26, 2021